Momba ny Norvezy Hianatra ny fomba ahafahana miaina Norwegians - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Zavatra fivavahana fankaherezana (ao amin'ny zavatra Kus) dia mihoatra lavitra noho ny zavatra Amerika Atsimo fotoana tonga lafatra na namorona leo ny mandrakizay maika ny olona tsara ny fialam-bolyNy fomba tsara indrindra mba hijery ny fahadiovana ny zavatra natiora dia miezaka amin'ny akanjo avy amin'ny zavatra volon'ondry fotsy, izay farany tratra tsara mendrika ny fahombiazana. Any Norvezy ny olon-drehetra dia manan-jo malalaka ny fidirana amin'ny natiora, anisan'izany ny ao amin'ny national parks. Te-hijery ny toerana ny hetsika dia ny toerana tena sy ny FAHITALAVITRA, ka noho ny"Mitsidika Oslo"izy no iray amin'ireo folo ireo bilaogera izay dia nitsidika ny tanàna. Oslo tamin'ny fomba ofisialy nifidy maitso renivohitr'i Eoropa amby roa-sivy ambin'ny folo. Ao amin'ny fangatahana, ny telo zavaboahary no nifidy folo ohatra ny ahoana ny aina tsy hanisy ratsy ny natiora.
Ny toetry ny tany Norvezy dia mahagaga: ny kristaly fjords, nihazakazaka riandrano, majestic tendrombohitra, fahiny vongan-dranomandry.
Ny fiarovana izany tontolo mahafinaritra, nentin-drazana fiaraha-monina sy ny kolontsaina ny andraikitra tsy ny mponina ao an-toerana ihany, fa koa ny mpitsidika. Ny lazan'ny e-bisikileta sy ny herinaratra fiara tany Norvezy dia tsy mitsahatra mitombo, vao haingana ny zavatra fjords nanomboka fongotra noho mamono. Izany rehetra izany dia toy ny koa ny fomba hafa ny fitaterana mandeha amin'ny herinaratra, dia tsy manao ny diany mandry fahizay, haingana, sy ny antony tsy mahaliana noho ny mpanara-dia ao amin'ny tambajotra sosialy. Ny lazan'ny e-bisikileta sy ny herinaratra fiara tany Norvezy dia tsy mitsahatra mitombo, vao haingana ny zavatra fjords nanomboka fongotra noho mamono. Izany rehetra izany dia toy ny koa ny fomba hafa ny fitaterana mandeha amin'ny herinaratra, dia tsy manao ny diany mandry fahizay, velona, ary nahoana ary tsy mahaliana noho ny mpanara-dia ao amin'ny tambajotra sosialy.
Ary Norvezy dia tsy misy afa-tsy
Nentim-paharazana zavatra Krismasy maharitra tsy ny andro vitsivitsy, fa be intsony.
Izany no tena olona vanim-potoana manokana ny fombafomba sy ny fanomanana.
Ary ny oram-panala izay manodidina saika ny firenena iray manontolo, sy ny maizina ny alina hanampy ny Krismasy toe-po ny herin'ny maizina. Nentim-paharazana zavatra Krismasy maharitra tsy ny andro vitsivitsy, fa be intsony. Izany no tena olona vanim-potoana manokana ny fombafomba sy ny fanomanana. Ary ny oram-panala izay manodidina saika ny firenena iray manontolo, sy ny maizina ny alina hanampy ny Krismasy toe-po ny herin'ny maizina. Edvard Munch nahazo ny toerana kanto noho ny mitebiteby ny fanahy sy ny zavatra natiora. Norvezy dia nalaza noho ny lehibe polar mpikaroka tany vaovao, anisan'izany ny Raoul Amundsen sy Fridtjof Nansen. Ny trano fisakafoanana nandray ny kintana telo Miller, ny mahomby ny fandikana ny zavatra culinary fomba amam-panao tanterahana amin'ny alalan'ny chef Eben Hill Banky. Ao amin'ny tantara sy ny fomban-drazana manokana firenena matetika lainga maro mahafinaritra ny zava-misy momba ny olona. Isa-minitra ao Norvezy dia ny zava-mahagaga.
Fantaro ny momba azy io.
Hahazo fitaomam-panahy. Norvezy hita eo ihany ny latitude amin'ny Alaska, guinée-bissau sy Siberia, fa ny toetr'andro any Norvezy dia be mangatsiatsiaka kosa ny faritra. Noho ny Golfa renirano ny toetr'andro dia be tsara fanahy kokoa noho ny iray dia mihevitra. Maniry fa tsy nanana fotoana lehibe tao Norvezy, ary hiezaka hanao ny zava-drehetra mba hahatonga ny sisa tsara kokoa.
Fiarahana tsy misy fisoratana anarana miaraka amin'ny finday ny sary video Mampiaraka Moscow Chatroulette lahatsary mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy dokam-barotra trandrahana mahafinaritra ny fisoratana anarana amin'ny finday ny sary amin'ny chat roulette tsy misy fisoratana anarana dokam-barotra Mampiaraka Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra manirery vehivavy te-hihaona